IOS DEVICE တွေကို PASSCODE မေ့သွားလို့ FIRMWARE ပြန်တင်ချင်သူများအတွက် FIRMWARE ပြန်တင်နည်း iOS Device တွေကို Passcode မေ့သွားလို့ Firmware ပြန်တင်ချင်သူများအတွက် Firmware ပြန်တင်နည်း - Myanmar Spirit
Home / IOS Knowledges / IOS DEVICE တွေကို PASSCODE မေ့သွားလို့ FIRMWARE ပြန်တင်ချင်သူများအတွက် FIRMWARE ပြန်တင်နည်း iOS Device တွေကို Passcode မေ့သွားလို့ Firmware ပြန်တင်ချင်သူများအတွက် Firmware ပြန်တင်နည်း
IOS DEVICE တွေကို PASSCODE မေ့သွားလို့ FIRMWARE ပြန်တင်ချင်သူများအတွက် FIRMWARE ပြန်တင်နည်း iOS Device တွေကို Passcode မေ့သွားလို့ Firmware ပြန်တင်ချင်သူများအတွက် Firmware ပြန်တင်နည်း
1:20:00 am tuntin
iOS Device တွေကို Passcode မေ့သွားလို့ဘယ်လိုပြန်လုပ်ရမလဲလို့မေးထားတဲ့ သူတွေအတွက် Firmware ပြန်တင်နည်းလေး
ကိုပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ iOS Device တွေမှာ Passcode မေ့သွားရင်တော့ အများဆုံးက Firmware ပြန်တင်ရတာများပါတယ်။
Passcode ပြန်ဖြည်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းရှိပေမဲ့ Passcode မေ့နေတဲ့အချိန်မှာ ဖုန်းနဲ့ computer နဲ့ချိတ်ဆက်ရင် Driver မသိတော့တာကြောင့်
အဆင်မပြေဖြစ်တက်ပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ ဘယ်လိုပြန်လုပ်ရမလဲဆိုရင်တော့ iOS တွေက Android တွေလို Recovery mode ကနေ
၀င်ရောက်ပြီး Factory Data Reset ချလို့အဆင်မပြေတာကြောင့် Firmware ပြန်တင်မှသာအဆင်ပြေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုအခြေအနေမှာ Firmware ပြန်တင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ မေးစရာရှိလာပါမယ်။ ဖုန်းကိုကျတော်တို့ computer ကနေ iTune နဲ့ချိတ်ဆက်
ပြီးပြန်တင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် computer ကနေ ဖုန်းကိုမသိတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်လိုလုပ်နိုင်ပါသလဲလို့မေးလို့ရပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျတော်
computer ကနေဖုန်းကို Driver သိရှိစေရန် Recovery mode ကနေ computer မှ iTune နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး Firmware တင်နည်းလေးမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းက service သမားတိုင်း နဲ့ iOS User အချို့အတွက်ကတော့ သိရှိပြီးသားဆိုပေမဲ့ မသိသေးတဲ့သူတွေလဲ
အရင်ဆုံးလိုအပ်တာကတော့ Computer မှာ iTune ဆိုတဲ့ Software ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ iTune software မရှိပါက Download အရင်ရယူပါ။
Download iTune >>> https://www.apple.com/itunes/
Download ရယူပြီးရင်တော့ iTune Setup.exe အား computer မှာဖွင့်ပြီး iTune Software အား install ပြုလုပ်ပါ။
Computer မှာ iTune ရရှိပြီဆိုရင်တော့ ဖုန်းအတွက် လိုအပ်တာကတော့ Firmware ပဲဖြစ်ပါတယ်။ iOS Device တွေက Firmware တင်မယ်ဆိုကိုယ့်မှာရှိတဲ့ Firmware က Lastest ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Firmware မရှိပါက ခုလက်ရှိ Lastest version Firmware အား အောက်ကလင့်ကနေDownload ရယူပါ။
iOS Lastest version Download >>> http://www.myanmarmobileapp.com/category/ios-firmware
Firmware ရယူပြီးရင်တော့ နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ Computer ကို Internet connection ရရန်ပြုလုပ်ပေးရပါမယ်။ iOS Firmware တင်တဲ့အခါ computer မှာ Internet Connection ရှိရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Computer သို့ ဖုန်းတစ်လုံးလုံးကနေဖြစ်ဖြစ် internet ရရှိစေနိုင်မဲ့ တနေရာရာကနေ Internet Connection လွှင့်ပေးထားပါ။ Computer မှာ internet connection ရပြီဆိုရင်တော့ Passcode ကျနေတဲ့ iOS Device ကို Power ဖွင့်ထားရက်နဲ့ပဲ Home Key + Power Key ကိုတွဲပြီးနှိပ်ထားလိုက်ပါ။ Power OFF သလိုမျိူး Screen မှိတ်သွားပါမယ်။ မလွှတ်ပဲဆက်ဖိထားပါ Apple Logo တက်လာပါမယ်။ မလွှတ်ပဲဆက်ဖိထားပေးပါ။ ခဏနေရင် iTune နဲ့ USB Connect လုပ်ခိုင်းတဲ့ပုံလေးပေါ်လာပါမယ်။ ဒါဆိုသင့်ရဲ့ iOS Device မှာ Recovery mode ကိုရောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းကို Computer နဲ့ချိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါ။ ခဏလောက်စောင့်ပေးပါ။ iTune Software အားဖွင့်စရာမလိုပါဘူး။ Computer ကနေ iOS Deviceအားသိပြီဆိုရင် iTune Software အလိုလိုပွင့်လာပါလိမ့်မယ်။ iTune Software ပွင့်လာတာနဲ့ မိမိရဲ့ iOS Device ရဲ့ name နဲ့အတူ Update နဲ့ Restore ဆိုတဲ့စာတန်းလေးတွေပါ iTune Software မှာပေါ်လာပါမယ်။ ဒီအခြေအနေရောက်ပြီဆိုရင်တော့ iOS Device အား Firmware တင်နိုင်ရန် Shift key ကိုဖိထားပြီးRestore ဆိုတဲ့စာတန်းလေးကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ Box လေးတစ်ခုပေါ်လာပါမယ်။ Box လေးထဲကနေ ကိုယ် Download ရယူထားတဲ့ Firmware ကို Location ရွေးပေးလိုက်ယုံပါပဲ။ iTune ကနေ Firmware ကိုဖြည်ချသွားပေးပြီး iOS Device အား Firmware တင်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်။ အချိန်ကြာတာကတော့ Internet Connectionအပေါ်မူတည်ပါတယ်။
အခမဲ့ Websitesများရေးတင်နည်း (စာအုပ်)
ကွန်ပျူတာကို ကလေးများအတွက် အကျိုးရှိစွာ သုံးမယ်
Microsoft Office Word မှာ pdf ဖြင့် သိမ်းမယ်
ADS POP-UP ကြော်ငြာတွေတတ်တတ်နေရင် [ALL AD-BLOCKING...
♪ Root မရတဲ့ ဖုန်းတွေအတွက် COC Zawgyi [Coc Zawgyi ...
ကွန်ပျူတာ လက်ကွက် လေ့ကျင့်မယ်
ရွှေရိုး Dictionary (မြန်မာ အင်္ဂလိပ် ၊ ထိုင်း ၊ ဂျပန...
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဘာသာစကားရွေးချယ်မှုကို ရန်တိုက်...
ခပ်မြန်မြန်လေးယူထားကြနော်... :).... By CHAN LAY -(...
iOS 10 မွာ ပါဝင္လာတဲ့ လူကြိုက်တြေ့အုံးမယ့် အေကာင်းဆ...
iPhone Smart Guide စာအုပ်နဲ့ Easy iDevice Guide စာ...
Window ကွန်ပျူတာ Password မေ့သွားခဲ့လျှင် Microsof...
Application တစ်ခုမှာ အကောင့်တွေအများကြီးသုံးလို...
အလွယ်ကူဆုံး Gmail Account ဖွင့်နည်းနဲ့အကောင်းဆုံး ...
Huawei G7 L11 ဖုန်းအတွက် ဗားရှင်း Android 5.1.1 Lo...
PC Mechanic ဤစာအုပ်ဖတ်ပြီးမှကွန်ပြူတာပြင်ပါ
SAMSUNG GALAXY NOTE3NEO SM-N750 ကို ROOT & MYANM...
♪ MPT နဲ့ FACEBOOK အလကားအသုံးပြုနိုင်ဖို့ - FACEBO...
မ၀င်စေချင်တဲ့ ဖုန်း Call တွေကိုဘယ်လို Block ထားမလဲ...